အကိတ်မလေး မေပန်းချီကတော့ သူမရဲ့ ကိတ်လွန်းတဲ့ အရာတွေကို အစွမ်းကုန်လှုပ်ပြီးဖေါ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / အကိတ်မလေး မေပန်းချီကတော့ သူမရဲ့ ကိတ်လွန်းတဲ့ အရာတွေကို အစွမ်းကုန်လှုပ်ပြီးဖေါ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး
အကိတ်မလေး မေပန်းချီကတော့ သူမရဲ့ ကိတ်လွန်းတဲ့ အရာတွေကို အစွမ်းကုန်လှုပ်ပြီးဖေါ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေး
အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှတွေ ပေါ်လွင်နေ တဲ့ ဖက်ရှင် အမိ အမိုက် နဲ့ အတူ “ တချို့ မေးခွန်း တွေ က အဖြေရှာ ရင်း ရူး ခဲ့တယ် ” ဆိုတဲ့ စာသားလေး နဲ့ ပုံတွေ ကို တင်လာ ခဲ့ တာ ပါ.. ။ အရမ်း လန်း တဲ့ မေပန်းချီ ရဲ့ ပုံလေး တွေကို ပရိသတ် ကြီး အတွက် ဝေမျှ ပေး လိုက် ပါ တယ် နော် … .
ပရိတ် သတ်ကြီး ရေ မေပန်းချီ က တော့ အမိုက် စား ခန္ဓာ ကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှတွေ နဲ့ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက် တဲ့ မျက်နှာ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ သူမ ဟာ နာမည်ရ မင်း သမီးတွေ ထဲ က တစ်လက် ဆို လည်း မမှား ပါဘူး နော် ။ ဗီဒီယို တွေေ ခတ်စား ခဲ့တဲ့ ကာလ မှာ လည်း ပရိတ် သတ်တွေ တစ်ခဲ နက် အားပေး ဝန်းရံမှု တွေကို ရရှိခဲ့ တာ ပါ .. ။
သရုပ်ဆောင် ပိုင်း မှာဆိုရင် လည်း အပြစ် ပြောစရာ မရှိအောင် ဆေးစက် ကျရာအရုပ် ထင် အောင် အကောင်း ဆုံး ပုံဖော် နိုင်သူ တစ်ယောက် လည်းဖြစ် ပါ တယ်နော်… . အရမ်း မိုက်တဲ့ ကောက် ကြောင်း အလှ တွေကို ပေါ်လွင် စေတဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဖက်ရှင်မျိုး တွေကိုများသော အားဖြင့် ဝတ် တတ် တာကြောင့် ပုရိ သ တွေ ရဲ့ အာရုံစိုက် အားပေးမှု တွေကို ရရှိထားခဲ့ ပါ တယ်နော်… .
အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွေတြ ေပၚလြင္ေန တဲ့ ဖက္ရွင္ အမိ အမိုက္ နဲ႔ အတူ “ တခ်ိဳ႕ ေမးခြန္း ေတြ က အေျဖရွာ ရင္း ႐ူး ခဲ့တယ္ ” ဆိုတဲ့ စာသားေလး နဲ႔ ပုံေတြ ကို တင္လာ ခဲ့ တာ ပါ.. ။ အရမ္း လန္း တဲ့ ေမပန္းခ်ီ ရဲ့ ပုံေလး ေတြကို ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္ ေဝမၽွ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
ပရိတ္ သတ္ႀကီး ေရ ေမပန္းခ်ီ က ေတာ့ အမိုက္ စား ခႏၶာ ကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွေတြ နဲ႔ တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္ တဲ့ မ်က္ႏွာ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ သူမ ဟာ နာမည္ရ မင္း သမီးေတြ ထဲ က တစ္လက္ ဆို လည္း မမွား ပါဘူး ေနာ္ ။ ဗီဒီယို ေတြေ ခတ္စား ခဲ့တဲ့ ကာလ မွာ လည္း ပရိတ္ သတ္ေတြ တစ္ခဲ နက္ အားေပး ဝန္းရံမႈ ေတြကို ရရွိခဲ့ တာ ပါ .. ။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္း မွာဆိုရင္ လည္း အျပစ္ ေျပာစရာ မရွိေအာင္ ေဆးစက္ က်ရာအ႐ုပ္ ထင္ ေအာင္ အေကာင္း ဆုံး ပုံေဖာ္ နိုင္သူ တစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္ေနာ္… . အရမ္း မိုက္တဲ့ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွ ေတြကို ေပၚလြင္ ေစတဲ့ ဆက္ဆီ က်က် ဖက္ရွင္မ်ိဳး ေတြကိုမ်ားေသာ အားျဖင့္ ဝတ္ တတ္ တာေၾကာင့္ ပုရိ သ ေတြ ရဲ့ အာ႐ုံစိုက္ အားေပးမႈ ေတြကို ရရွိထားခဲ့ ပါ တယ္ေနာ္… .
Previous post ထင်ပေါ်လွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ခေးကြီးလုကတော့ ပရိတ်သတ်တွေ အံ့သြသွားအောင် သူမရဲ့ အလှတရားတွေကို ချပြလိုက်ပြန်ပြီ
Next post ကြည့်ရှုသူပရိတ်သတ်တို့ ရင်ခုန်သံတွေ ဗြောင်းဆန်သွားအောင် ကိုယ်လုံးလေးကိုလှုပ်ပြီး အမိုက်စားလေး ချပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ ဗီဒီယို